Izindlela ezingu-10 zokwandisa ukuthengiswa kwe-Ecommerce yakho okuqinisekisiwe ngu-Semalt
Empeleni, abanikazi bebhizinisi eCommerce benza imali eningikusuka emikhiqizweni yabo. Ucwaningo olusanda ku-Statista luveze ukuthi ukudayiswa kwe-eCommerce emhlabeni jikeleleizoba ngama-2.86 trillion US dollars ngo-2018. Ngeshwa, awugcini nje ukwakha i-eCommercesigcine futhi ulindele amakhasimende ukuthi athulule isayithi lakho. Uzodinga ukuqala imikhankaso yokukhangisa yimpumeleloukuheha inzuzo yabathengi - home temperature monitors over internet.
Izindaba ezinhle ukuthi ngamaqhinga alandelayo okukhangisa aqinisekiswe yi-Semalt Digital Services uzobaukwandisa eCommerce yakho yokuthengisa. Ivan Konovalov, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , unikeza amathiphu abalulekileyiziphi izindlela zokugcina eCommerce okufanele zizisebenzise ukuze ziphumelele.
1. Sebenzisa ukuThengiswa kokuPhezulu nokuThengiswa kokuPhepha
Ukuthengiswa okuphezulu nokuthengiswa okuhamba phambili kuyizindlela eziqinisekisayo zomlilo ongayisebenzisela ukwandisa ukuthengisa kwe-intanethi. Ukuthengiswa okudlulileindlela yokuletha imikhiqizo ehlobene kanye nalokho ikhasimende elikucabangayo ukuthenga. Inikeza aikhasimende eziningi imikhiqizo ehambisanayo ongakhetha kuyo. Ukudayiswa okuphezulu kuyisenzo sokuthengisa okuphakeme kakhuluuhlobo lomkhiqizo ikhasimende elithengayo. Le ndlela ivumela ikhasimende lakho ukuthi libone umkhiqizo ofanayongezici ezithuthukile kanye nentengo ephakeme.
Lezi zindlela zokuthengisa zenzelwe ukukhuthaza amakhasimende ukuthenga eminye imikhiqizo. Iqiniso ukuthi laphoamakhasimende abona okungaphezu kwalokho abakudingayo, azoshukumiswa ukuthenga okuningi. Ucwaningo oluningi lubonisiweukuthi ukudayiswa okuphezulu nokuthengiswa phambili kududuza amakhasimende ukuba abuyele ngaphezulu.
2. Thuthukisa Iwebhusayithi Yakho Yokwakha
Eminyakeni yobudala bedijithali yanamuhla, udinga ukuklanywa kwewebhusayithi yangokwezifiso ukuheha nokubandakanya amakhasimende angakhona. WakhoI-eCommerce esitolo iyingxenye yenkampani, futhi umklamo wayo kufanele ubonise ukuthi ubuchwepheshe bakho bubuchwepheshe kangakanani.Eqinisweni, imikhankaso yakho yokuphromotha kufanele iqale kusuka esitolo sakho kanye. Ochwepheshe be-Semalt bavezileiqiniso lokuthi amakhasimende avame ukugwema isitolo se-intanethi uma kungenakho ukwenza ngokwezifiso ezibalulekile.
Ukwakha i-eCommerce esitolo eklanyelwe kahle isinyathelo esibalulekile ekunqobeni abancintisana. Uma ukhonauhlela ukuvuselela kabusha isitolo sakho, bese uqinisekisa ukuthi inomklamo ophendulayo, okwenza amakhasimende aamazing shopping shopping. Eqinisweni, uzoshayela ukuthengisa okwengeziwe uma wenza kube lula ngabantuhamba futhi uthole imikhiqizo kuwebhusayithi.
3. Yenza Isayithi Lakho Likahle Ngeselula
Phakathi neminyaka embalwa edlule, amaphilisi amaningi amasha kanye nama-smartphones abelokhu efika emakethe.kwanda kakhulu inani labathengi be-intanethi. Izifundo zibonisa ukuthi inani labathengi bezelulaidlulile lokho kokusetshenziswa kwedeskithophu. Kule minyaka yobudijithali, ukwenza isitolo sakho se-eCommerce sisamukele ngokuphelelekumadivayisi ahlukahlukene ephathekayo yingxenye ebalulekile empumelelweni yebhizinisi lakho.
Ngisho neGoogle iphakamisa izikhundla zokusesha zamasayithi amawebusayithi abonisa ngokufanele kumadivayisi eselula.Ukudala inguqulo yeselula yewebsite yakho yamanje ungasebenzisa ipulatifomu yokuguqula noma iselulaama-plugin. Ukudala isitolo se-eCommerce esinobuhle yindlela enhle ongayisebenzisa ukuveza ibhizinisi lakhokubathengisi beselula. Ukuba nokusebenza kahle kwesitolo, uzothuthukisa izinga lokuguqula futhi ukwandise ukuthengisa.
4. Sebenzisa Imifanekiso Yemikhiqizo Yekhwalithi Ehle
Ungasebenzisi noma yisiphi isithombe somkhiqizo nje ngenxa yokwengeza izithombe. Izithombe zakho zemikhiqizo kufanele zibe nazoizinga eliphezulu. Kuyiqiniso ukuthi ukuthola izithombe zemikhiqizo yobuchwepheshe kungaba umsebenzi obangela ukukhathazeka, kodwaKuyiqiniso futhi ukuthi bangasiza ukuheha amakhasimende angakhona esitolo sakho. Ochwepheshe bethu baye bafakazela abaningiizikhathi ezifaka izithombe ezicacile zento ngezinketho zokuzondeza zikhuthaza amakhasimende angakwazi ukuthenga umkhiqizo.
5. Yenza ngcono Ikhasi Lomkhiqizo Izincazelo
Izincazelo zekhasi lakho lomkhiqizo zinakho ukuheha amakhasimende ukuthi athenge. Qiniseka ukuthiuye uchaze izici ezisebenzayo ezenza amakhasimende anentshisekelo. Qhubeka ubakhuthaza phambiliumnsalo. Amasayithi e-eCommerce athandwa kakhulu njenge-Amazon abonisa izici zawo eziyinhloko zomkhiqizo ukuthuthukisa ukuthengisa.
Izincazelo kufanele zichazwe kahle ukuze noma yiliphi ikhasimende elizolifunda lizokhuthazwaukuthatha isenzo. Ungasebenzisa izinhlamvu ezimfushane ezikhangayo ukuze ubonise izici eziyinhloko zomkhiqizo. Akungatshazwaukuthi uzobe ulahlekelwa ekuthengiseni okuningi lapho imininingwane okufanele ikhuthaze khonaamakhasimende ukuthenga atholakala ngencazelo.
6. Dala Imikhiqizo Ekhuthazayo Yamavidiyo Amavidiyo
Umkhankaso wevidiyo kuyisisindo esibalulekile sokumaketha kwezitolo eziningi ze-eCommerce, ezisetshenziselwa ukubaukwandisa ukuthengisa. Abathengi banamuhla abanikwe amandla ukukhetha ukubuka amavidiyo ngaphezu kwamanye amafomukokuqukethwe. Dala amavidiyo amasha okuphromotha amancane wemikhiqizo yakho, faka kubalulekileizici zemikhiqizo yakho engabamba ukunakwa kwamakhasimende. Hlanganisa la mavidiyo kumakhasi ewebhu womkhiqizo ahlukahlukene.
Ungaphinde ulayishe amavidiyo womkhiqizo kuwo wonke amasayithi omculo adumile ukuze ukwandise ukuvezwa. Musaukhohlwe ukwandisa amavidiyo wakho nge-SEO ngokufaka amagama angukhiye esihlokweni sevidiyo nencazelo. Wenaungangeza ikheli lakho lewebhusayithi njengombhalo kule ncazelo yokushayela imoto.
7. Dala ukuphakanyiswa kwexabiso elihlukile
Ukuhlukahluka okukhulu okukhona endaweni eCommerce kwenza kube nzima izinkampaniukuzihlukanisa nomncintiswano. Kungakhathaliseki ukuthi uyingqayizivele ucabanga ngemikhiqizo yakhokukhona, mhlawumbe esinye isitolo lapho, esinikeza okufanayo noma okufanayoimikhiqizo kumakethe wakho okuhlosiwe. Uma kunjalo, yini ongayenza ukuze wenze umkhiqizo wakhoukuphuma ebangeni lezinkulungwane ezinye izinto? Isiphakamiso senani eliyingqayizivele yilokhoizokwenza ukhethe umkhiqizo wakho. Udinga ukubhala ukuhleleka okuhle okuyingqayizivele okubhekayoinani lomkhiqizo wakho. Ukunikezela, uzobe ukhululekile emncintiswaneni, futhi ujabulele izinzuzo zobuholi.
Isiphakamiso esiyingqayizivele sezindleko singahlanganiswa ekhasini lakho eliyisiqalo, ikhasi lomkhiqizo, kanye nesikhangisoikhasi lokukhulisa izinga lokuguqulwa. Ukuba nolwazi lwalokho okubeka uphawu lwakho ngaphandle kwezinyeImikhiqizo izokusiza ukuba uqalise ibhizinisi leCommerce eliphumelelayo. Leli qhinga lingakusiza ukuhlukanisa nabadlali bakho.
8. Ukunikezwa Okukhululekile Nokubukeka Okulula
Le ndlela yokumaketha ingashukumisela amakhasimende angakwazi ukuthenga kuwe futhi athuthukise ukuthengisa ngokucacile.Ukubuyiswa komkhiqizo ku-inthanethi kuye kwasiza eziningi ze-eCommerce brand ukuze zithole ukwethembeka kwamakhasimende futhi zenze bazimisele ukubuya okungaphezulu.
Ukubuyiswa kwe-inthanethi okuvamile kujwayelekile kwi-eCommerce ibhizinisi, futhi amakhasimende azobuya nemikhiqizobathenga ngezikhathi ezithile. Ikhasimende lakho linganquma ukubuyisela umkhiqizo owonakelenoma azihambisani kahle. Amakhasimende abuya cishe ukusuka komunye wemikhiqizo emithathu. Eqinisweni, iIningi labathengi libuyekeza inqubomgomo yokubuya ngaphambi kokuthenga.
Uma amakhasimende akwaziyo ukuthi angakwazi ukubuyisela ngokukhululekile izimpahla, cishe amathubabuya futhi. Ucwaningo oluqhutshwa yi-Wall Street Journal luqinisekisile ukuthi okungcono kakhuluamakhasimende yiwo amazinga aphezulu okubuyisa. Ukusetshenziselwa kwalenqubomgomo kumakhoukujwayela kuzokusiza ukuba ugweme ukukhulula amathuba amakhulu okuthengisa kanye namabhizinisi.
9. Bonisa Imikhiqizo ekhasini lakho lasekhaya
Ikhasi lakho lasekhaya lingenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu kuwebhusayithi yakho ye-eCommerce ngakho kufanelesebenzisa ukugcina amakhasimende ahlanganyela. Bonisa imikhiqizo edayiswa kakhulu kakhulu ukuze amakhasimende angakhonabangawabona ngokucacile. Kungenzeka ukuthi noma iyiphi i-shopper efika esitolo sakho seCommercengamanye amakhasi anganquma ukuvakashela ikhasi lasekhaya ukubona ezinye imikhiqizo. Ngakho, ukubeka kwakhoImikhiqizo ethandwa kakhulu ekhasini lasekhaya ikhuthaza kakhulu ukuthengisa.
10. Ukunikeza Izinketho Zokuthumela Eziningana
Ukuhlinzeka amakhasimende ngezinketho ezimbalwa zokulethwa kuzokuthuthukisa ukuthengisa kwakho. Ngokumangalisa,kodwa amabhizinisi athengisa imikhiqizo yekhwalithi inikeza isipiliyoni esiyingqayizivele se-intanethi kakhulungokuvamile ahluleka uma kuziwa ekulethwa kwezidingo. Uma uzokugqugquzela amakhasimende ukuthi athenge kuwowena, bese ulungele ukunikeza izinketho eziningi zokulethwa. Isu eliwusizo lokuthengisakulula ukuyisebenzisa, kodwa kukusiza ukuba ugweme ukulahlekelwa amakhasimende angase ube khona futhi ubavumele ukuba baye kumncintiswaneni wakho.
Kusobala ukuthi i-intanethi ishintshe indlela abantu abafuna ngayo nokuthenga imikhiqizo. Leziizinsuku ezinedeskithophu noma idivayisi yeselula ongathenga noma yini oyidinga ku-intanethi. Abantungokuzikhethela ukujoyina ibhizinisi eCommerce. Ukuze uqhubeke nejubane lokukhuphukaukuthandwa kwezitolo ezithengiswa ku-intanethi, wamukelekile ukubhekisela kosizo lochwepheshe oluhlinzekwa yi Semalt Digital Services .